Global Voices teny Malagasy » Nampitombo Avo Roa Heny Ny Trangan’Extremisma ao Rosia ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Septambra 2014 15:38 GMT 1	 · Mpanoratra Tanya Lokot Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sivana, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Mihamirona amin'ny politika kokoa ny harato (web) rosiana ka mangeja ireo votoaty “extremista” ny mpampihatra ny lalàna. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Nitombo avo roa heny ny trangan-keloka bevava noho ny extremisma tamin'ity taona 2014 ity, ary ny Internet no tompon'andraikitra voalohany amin'izany fitomboana izany, satria mihamahay kokoa ny resaka harato (web) ny ao amin'ny hetsika ara-politika, ny ao amin'ny fanentanana sy fandraisana mpikatroka an-tserasera ary ny fampiharan-dalàna.
Araka ny tatitra nataon'i Izvestia  izay nanatsonga antotanisa avy ao amin'ny Fitsarana Tampony Rosiana, naharay raharahan-keloka bevava mifandraika amin'ny andinin-dalàna miresaka “extremisma” faha-280 sy faha-282 miisa 260 ny fitsarana tamin'ny 2012, ary olona 208 no voaheloka ho nanao extremisma. Tamin'ny 2013 niakatra ho 402 izany isa izany ary olona 309 no voaheloka.
Nialoha ny faran'ny volana Aogositra 2014 efa nandefa raharaha miisa 485 tany amin'ny fitsarana ny sampan-draharahan'ny Minisiteran'ny Atitany misahana ny fiadiana amin'ny extremisma, ka 594 ny olona voatonona hiaro (tena) amin'ireo raharaha ireo. Ny faritr'i Sverdlovsk sy i Tatarstan no mitana ny lohalaharana amin'izany trangan'extremisma ao Rosia izany, izay manana raharaha 38 sy 33 araka ny filaharany.
Milaza ny Minisiteran'ny Atitany fa ny fitomboan'isan'ny raharaha sy ny fiampangana dia vokatry ny fiakaran'ny fahazotoana miditra an-tserasera, avy amin'ny fahazotoan'ny olom-pirenena hiresaka politika ny ampahany iray, sy noho ny fampiharana ny lalàna ny ampahany faharoa. Tamin'ity taona 2014 ity fotsiny, nihoatra ny 500 ny “fitaovana extremista” noesorina avy amin'ny harato (web), ary pejy na vondrona 406 no napetraka ho “extremista” ka nakatona. Namehy ny Minisiteran'ny Atitany fa lasa tsy maherisetra ankarihary ny extremisma ao Rosia, ary lasa nomerika toetra kokoa, noho ny fifindrany mankao amin'ny serasera. Mihavitsy kokoa ny hetsika maherisetra ataon'ireo voapetaky ny manampahefana ho “extremista” eny an-dalana ary mampiasa kokoa ny tambajotra sosialy ry zareo hihetsehana sy hivoriana ho fanohanana azy ireo.
Nisy vondrona iray mpandinika ny resaka extremisma ao amin'ny Oniversitem-Panjakana ao Saint Petersburg nanao fehin-kevitra fa ny ankamaroan'ny fitaovana tonga any amin'ny famotorana heloka bevava dia efa nivoaka an-tserasera taona maromaro lasa izay, ary ny antony tokana mampiavosa ny raharaha amin'izao fotoana izao dia noho ny fironan'ny fampiharan-dalàna amin'ny fisavana haba-tranonkala kokoa sy ny fahitana votoaty “extremista”. Sergey Kuznetsov, talen'ilay vondrona mpandinika, niteny tamin'i Izvestia fa ny ankamaroan'ny famotorana dia mitodika any amin'ireo votoaty efa nitoetra an-tserasera an-taonany maro, fa izao vao tsikaritra ao amin'ny radaran'ny mpanao famotorana.
Miaiky ny mpiasan'ny Minisitera fa sarotra kokoa ny miady amin'ny “extremista” an-tserasera, satria mamela azy ireo tsy ho fantatra ny tahala ary ahafahany manokatra sehatra vaovao hanaovana hetsika politika raha vao voasakana ny sehatra efa nisy , na izany amin'ny alalan'ny fanaovana haba-tranonkala fitaratra (kambana) na amin'ny alalan'ny fananganana dika karbôna ny pejin-dry zareo hitam-bahoaka ho ao amin'ny tambajotra sosialy.
Nanambara  ihany koa i Kuznetsov fa lasa tsy mavitrika an-tserasera loatra intsony ny Rosiana Nasionalista, raha naka ny toerana banga kosa ny Okrainiana.
Mihamalazo ny fahavitrihan'ny nasionalisma rosiana ao amin'ny tambajotra sosialy, raha hita nitombo haingana kokoa ny isan'ny fitaovana avy amin'ny Okrainiana extremista. Tonga ao amin'ny ampahan-tambajotra sosialy rosiana ry zareo ary mamoaka lahatsoratra, sary ary lahatsary fihantsiana.
Nanao ezaka hamerana ny fahalalahana an-tseraseran'ny olom-pirenena ao aminy i Kremlin tao ho ao, ary iray amin'ny ohatra maro azo raisina hanaovana ny fangejana ny fampidirana ny lahatsoratra “extremista” ho ao anatin'ny lalànan'ny heloka bevava sy ny fampiharana azy ao amin'ny votoaty an-tserasera. Fandraisana an-tanana hafa malaza ihany koa ny lalànan'ny blaogera  mitaky amin'izay rehetra manana mpamaky mihoatra ny 3000 isan'andro ho anaty ny rejisitry ny governemanta, ny lalànan'ny fitazonana rakitra manokana  manery ny haba-tranonkala hitahiry ny rakitra mombamomba ny Rosiana ao anatin'ny firenena, ary ny tena tafahoatra tsy nisy fahamalinana dia ny tolo-kevitry ny politiana sasantsasany, tahaka ny antso hiomanana amin'ny Aterineto mahazaka tena  ao Rosia.
Raha hita ho misy fanjohin-kevitra mazava ny famelabelaran'ny manampahefana amin'ny fitomboan'ny fiampangana ny extremisma, dia hita ao amin-dry zareo ihany koa ny fanaratsiratsiana ny aterineto ho sehatra mbola tsy misy lalàna, tsy voaaro ary mila fanaraha-maso sy fifehezana kokoa mba hahafahany miodina soa aman-tsara. Hita ho paikady fampitahorana mety handrava ny fanirian'ny Rosiana maro hamoaka hafatra mitsikera ao amin'ny blaoginy sy ao amin'ny pejiny, na hamelana azy ireo hizotra amin'ny lalana tsy tian'ny mpitondra ny fisian'ireo tenimiafin'imailaka niporitsaka , ny fanakatonan'ny  VKontakte ireo kaonty maro manana fifandraisana amin'ny ISIS, ary ny fampiasana tsy amim-pahamendrehana ataon'ny miaramila rosiana  [mg] ny tambajotra sosialy mampiharihary ny fidiran-dry zareo any Okraina , ny fieloelon'ny “extremista an-tserasera,” ary ny kotaba manodidina ny Okrainiana nationalista sy ny fandaharan'asan'ny elatra politika farany havanana. Tahaka ny ahoana moa izany ny tahotry ny Rosiana manampahefana amin'ny fijoroan'ny aterineto malalaka ary mbola ho hita hoe tahaka ny ahoana ny ataon-dry zareo hampitahorana ny mpisera Rosiana hanaovany izay hahafaly ny mpitondra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/18/64251/
 lalànan'ny blaogera: https://globalvoicesonline.org/2014/08/25/blogger-law-russia-activists-ukraine-censorship/
 fitazonana rakitra manokana: http://therunet.com/news/3552-zakon-o-personalnyh-dannyh-vstupit-v-silu-pochti-na-dva-goda-ranshe
 Aterineto mahazaka tena: https://globalvoicesonline.org/2014/09/06/us-russia-internet-cut-blackout-security/
 tenimiafin'imailaka niporitsaka: https://globalvoicesonline.org/2014/09/10/russia-email-yandex-mailru-passwords-hacking/
 miaramila rosiana: https://mg.globalvoicesonline.org/2014/09/08/63948/
 fidiran-dry zareo any Okraina: https://globalvoicesonline.org/2014/07/31/russia-ukraine-selfies-military-attack/